Ozi Nkwukọrịta - Ebe Ndị Na-agụ Akwụkwọ Nwere Olu
Bụrụ onye nyere aka
Bụrụ onye debanyere aha
EGO ndị na-agụ akwụkwọ nwere ike ikwu okwu
Nkịta nke Dow - 2019
Ego Onu Ogugu
Ndị ahịa ahịa ahịa Amazon
Enyemaka Mgbu - Numbing ude, Gel & Spray
Nyocha CN Market
Iwu ntinye ederede
CN nyeere anyị aka ịbawanye ego ị nweta site na 50%
Mgbe agbachara ọtụtụ ọrụ PR Achọpụtara m CN
Nweta ugwo iji kọọ Akụkọ!
Nyefee Artilces - Kwusara
DARPA bịanyere aka na nkwekọrịta Northrop Grumman iji zụlite ndị na - ebuso ndị iro mgbagha maka nchekwa nchekwa ikuku nke American - isnye bụ Nchegbu?
DARPA bịanyere aka na Northrop Grumman na nkwekọrịta dị na $ 13 nde iji zụlite ndị na-ebuso ndị agha mgbagha agha maka nchekwa ikuku ikuku nke America. Ka ọ dị ugbu a, naanị otu ngwa agha nke nwere ike igbatu usoro Hypersonic bụ egbe laser. Site na ọsọ nke ọkụ, egbe na-agba ọkụ ugbu a ebe ebumnuche na ...
Mee nkuzi eletriki di nkpa maka oganihu gi site na ibanye na ngalaba achoro
You chọrọ isonye na nkuzi ọrụ aka ọhụrụ nke ga - enyere gị aka ịmalite ọrụ gị n'ụzọ ziri ezi? Havetụleela ịbụ onye ọrụ ọkụ eletrik? Ọrụ nke ọrụ eletrik gụnyere ilekọta ọtụtụ ihe dị iche iche gụnyere nke ịkpụ, ịwụnye, ịchịkọta ma ọ bụ sistemụ ule n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Onye ọkụ eletrik…
Njikere! Coronavirus ọhụrụ nke China si na ngwa agha ha na-alụ ọgụ banyere nje banyere ndu ha?
Onye nchịkọta akụkọ Christina Kitova January 26, 2020 January 26, 2020 Christina Kitova
Ka ọ dị ugbu a, ụwa na-elele ozi banyere nje ọhụrụ a sitere na China, Dika Healthtù Ahụ Ike itwa na-akpọ ya 2019-nCoV. Ọ bụ oria na-efe efe na-akpata ọnyụkpa nke a na - ahụbeghị na mbụ ndị mmadụ. 2019-nCoV abụghị otu coronavirus ahụ kpatara Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) na…
Olê, Olê Mister - Akụkọ nke Jorge Jesus na Flamengos
Onye nchịkọta akụkọ Miguel Torneire January 26, 2020 January 26, 2020 Miguel Torneire
Onye isi Portuguese ahụ egosipụtala oke agụụ na-akparaghị ókè maka ịrụ ọrụ na iji merie ọnwa isii dị mkpirikpi, echiche na-ama aka mgba, yana ịkpọte nnukwu onye na-agba bọọlụ nke Brazil. Jụọ onye Brazil ọ bụla ihe ọ chere banyere Soccer, nzaghachi ya ga-agwa gị mmetụta mba ahụ na-enwe banyere egwuregwu ahụ. Soccer bụ akụkụ dị mkpa nke ...
Nchọpụta Ahịa na Akụkọ
Ngwakọta Nrụpụta Dị Elu (HPC) dị ka Ahịa Ọrụ
Ahịa Pet nri na-ewepụta nri
Ofntanetị nke ihe (IoT) na ụlọ ọrụ ahụike na-eme ka nkwukọrịta dịkwuo mma
Ahịa Ọkwa Onye na-ere ahịa
Azụmaahịa Agụmagwa Edere mmadụ
Azụ Ego ejikọtara na-eme ka ọrụ ha ka mma
Market Owu ewu ewu Smart
Ahịa Methanol na Achọrọ
Ahịa Mbipụta Mbipụta Mmiri na-enweta ọtụtụ mmanụ na mmanụ
Shedding Ìhè na Mkpụrụ Solọ Anyanwụ Elu Anụmanụ
Naanị $ 1 / pịa
Nyefee mgbasa ozi gị ebe a
African Union Kwurịtara Nsogbu Libya
Isi obodo Congo, nke dị na Brazzaville ga-enwe ọgbakọ obere Mịnịsta banyere nsogbu Libya na Jenụwarị 30, tupu nzukọ nzukọ AU ga-eme na February 9. Ọ na-abịa n'otu oge mgbe isi obodo Libya na-agbara ndị…
Añez mara jijiji na nhoputa ndi Bolivian, na-ekwupụta ịgba osote onye isi ala
Onye isi oche oge Bolivia, Jeanine Añez, kwupụtara ọkwa ya maka onye isi ala na Fraịde, na mmegharị nke kpalitere nkatọ site na mmegide obodo ahụ. A na-eme ntuli aka onye isi ala na Bolivia maka May 3. “Ọ bụ…
Erdogan na-agba ume ka enwee nrụgide na Haftar Libya
Onye isi ala Turkey Recep Tayyip Erdogan gbara ume ka ọ bụrụ nrụgide mba ụwa dị elu na ndị agha ọwụwa anyanwụ Libya ịnakwere mgbagha na-adịru nwa oge, ma kwuo na Turkey ka na-agba mbọ ịkwado gọọmentị Libya nke ndị…
Ntinye uche OPEC n’abia nzuko nke March
OPEC na-eleba anya ịgbatị mbelata mmanụ a na-emepụta ruo na njedebe nke afọ, ebe ahịa a ka na-eleda anya, mana mkparịta ụka ka na-amalite n'oge. Newslọ ọrụ mgbasa ozi TASS Russia kwuru na isi mmalite…
Ntuliaka Pọtugalịpụrụ ewepụrụ ndị na-emegide Saied site na gọọmentị
Onyeisiala Tunisia bụ Elyes Fakhfakh kwuru n'oge a na-enwe mkparịta ụka ụnyaahụ na ọ ga-arụ ọrụ iji guzobe obere ụlọ ọrụ na gọọmentị na-emekọ ihe ọnụ nke na-akpọkọta ndị otu na-akwado President Kais Saied na agba nke abụọ…
Houthi Militia na-atụfu ihe ngosi dị na al-Dhalea
Ọnwụ ndị Houthi ka njọ ka ọ na-alụso ndị otu jikọtara ọnụ na ọchịchị gọvanọ al-Dhale, ebe ndị agha mba ahụ kwusiri ike na ọgụ a na-atọhapụ Sanaa bụ nhọrọ a na-agaghị agbanzigharị. Ndị agha ndị agha gwara ndị nta akụkọ…
France gosiputara ikpe mbu Coronavirus
Ministri Ahụike nke France kwenyere na mmadụ atọ ndị Coronavirus Friday bu ọrịa nke butere ọrịa mmezu ume na mpaghara Hubei nke China. Onye Minista Ahụike France, Agnes Buzyn dọrọ aka ná ntị na, na…
UN Kpọọ Oku na PM Lebanon PM ka Ọ gwụrụ Nrụrụ Aka
Onye nhazi otu mba ụwa na Lebanon, Jan Kubis kwuputara na ya ahụla ọkwa Prime Minister-họpụtara Hassan Diab na-arụ ọrụ na mmejuputa mmezi na ịlụ ọgụ nrụrụ aka. Mgbe nnọkọ ụnyaahụ, United Nations kwusiri okwu ike…
Puku kwuru puku kwụrụ na Iraq megide ndị agha America
Puku kwuru puku mmadụ zara oku onye ụkọchụkwụ Shiite Muqtada al-Sadr mere ngagharị iwe na Fraịde megide ọnụnọ ndị agha United States na ala Iraq. Onye na-ekwuchite ọnụ gụrụ nkwupụta al-Sadr n'oge ngosipụta, nke ọ kpọrọ…
Ọnwụ Coronavirus na-agbago na 26 na China
CGTN nke China steeti netwọkụk CGTN kwupụtara n'ụtụtụ Fraịde na ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ n'ihi ọnya coronavirus ọhụrụ na mba ahụ ruru 26. Nke a bụ mgbakwunye na nkwenye nke 881 ndị mmadụ…
Sudan abịanye aka na ndị nnupụisi, nsogbu na-aga n'ihu na Khartoum
Gọọmentị Sudan na otu nnukwu ndị nnupụisi bịanyere aka na nkwekọrịta mbụ na Fraịde, na nhazi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nchekwa, na-emeghe ụzọ maka nkwekọrịta nkwekọrịta zuru oke site na mkparịta ụka na-aga n'ihu. Ndị Sudan…
Ọnọdụ na-aga n'ihu na France, na kabetị na-agazigharị mmezi ụgwọ ezumike nka
Na Fraịde, ndị ụlọomeiwu France tụlere ma gafee arụmụka mgbanwe ego ezumike nka nke Onye isi ala Emmanuel Macron tụpụtara. Ndị na-emegide ndozigharị ahụ ahọrọla ụbọchị a iji hazie ihe mmalite na ngosipụta. Onye isi General…
Coronavirus: China kewapụrụ nde mmadụ iri abụọ, Cancels Spring Festival Ememe
Mgbasa nke Coronavirus ọhụrụ ahụ agbasaghị njikwa na China na mkpesa 504 na ọnwụ 17 nwụrụ. E kewapụrụ ọtụtụ obodo nwere ihe karịrị nde mmadụ iri abụọ, gụnyere Wuhan, Huanggang,…
Oge ezumike: China na-alụ ọgụ Wuhan Coronavirus megide mbịarute Afọ Ọhụrụ China
Onye nchịkọta akụkọCorey Barro
N’oge na-adịghị anya otu ọnwa kemgbe ntiwapụ ọhụrụ, Wuhan coronavirus ọhụrụ emeela 644 ndị ọrịa butere ọrịa, ikpe 422 na-enyo enyo, na mmadụ 18 nwụrụ na China. Agbanyeghị, na mbata nke Afọ Ọhụrụ ndị China na…
Griffiths na Sanaa iji zute Houthis
Martin Griffiths, onye nnọchi anya UN UN na Yemen, rutere taa na Sana'a iji kpaa maka ịkwụsị mbuso agha agha na ụzọ isi nwee mkparịta ụka ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Yemen. Ebe isi akụkọ na ọdụ ụgbọ elu Sanaa International…
Ncheta ụbọchị ncheta mba ụwa zuru ezu
Onye isi ala Russia Vladimir Putin rutere Thursday maka ncheta ụbọchị ncheta Oké Mgbukpọ, wee nọdụ na Prime Minista Israel Benjamin Netanyahu. Tupu nke a, ọ zutere nne Naama Isaka, nwanyị ahụ a tụrụ mkpọrọ na Russia…
Ndị ọkachamara UN na-akpọ maka nyocha n'ime nzuzo na ekwentị Bezos
Ndị ọkachamara UN na Wednesde kpọrọ oku ka ha nyochaa nyocha nke ohi na izu nke izu nzuzo nke nzuzo na nzuzo nke ekwentị nke onye nchoputa Amazon na onye isi ala, Jeff Bezos. Ekwuru na ekwentị hacked…
Iran na - eyi Egwu iwepụ Nkwekọrịta Nkwekọrịta Nuclear
Minista mba ofesi Iran Mohammad Javad Zarif ekwuola na obodo ya ga-ahapụ nkwekọrịta na Non-Proliferation nke Ngwongwo Nuklia (NPT) ma ọ bụrụ na ndị Europe gosipụtara mmebi nke Iran Nuclear Deal na…
Ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-ewetara mpekere mbido nke mbụ na Trump Impeachment
Na Wenezde, ndị Democrats malitere igosipụta ebubo mbụ ha na ikpe Senate maka Donald Trump, ụbọchị mgbe nnọkọ na-ese okwu iji tọọ iwu maka usoro a. Ndị Republican ka n'ọnụ ọgụgụ na…
Oge ọhụụ nke Oge Ọchịchị gọọmentị Russia bụ Farce - Kedu Ihe Ọhụụ?
A kpọsara nhọpụta ndị ọhụrụ, ọ bụghị ihe ọhụrụ. Okwu onye isi ala Russia Vladimir Putin sochiri arụkwaghịm nke Prime Minista Russia Dimitry Medvedev na ndị otu ya. Putin chọrọ imezigharị…
Russia na - eme atụmatụ imepụta uzo ozo maka GitHub - Goodbye Russia site na Global Market
Russia na-eme atụmatụ ịmepụta nke ọzọ na Microsoft GitHub, ụlọ ọrụ ụwa niile na-enye nnabata maka mmepe ngwanrọ, njikwa nsụgharị site na iji Git. Microsoft nwetara ụlọ ọrụ ahụ na 2018 maka ijeri $ 7.5.…
Facebook na-agbachitere Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Onye nchịkọta akụkọSamuel Gush. W
Ekwuputala na ihe na-ezighi ezi na netwọ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ nwere mmetụta dị ukwuu na ntuli aka ndị isi ala US 2016. Networksfọdụ netwọọdụ mmekọrịta zara site machibido mgbasa ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere ike iduhie. Facebook agbanweela, gbanwere…
Ndị omebe iwu United States setịpụrụ Iwu Iwu Impeachment Trump
Ndị omebe iwu na United States n'isi ụtụtụ Wenezdee, mgbe esemokwu 13 gasịrị, debere iwu maka ikpe ọnwụ nke Onyeisi Ala America Donald Trump. Ndị otu Republican jụrụ mgbalị niile ndị Democrats na-akpọ nke ọhụrụ…
Iran gosipụtara ụgbọelu Ukraine site na ụgbọ elu abụọ
Ndị agha Iran gbara mgbọ elu ndị njem ụgbọ elu Ukraine nke PS752 jiri mgbịrịgba abụọ dị n’elu elu mee ihe mgbe ha nwesịrị ya maka ụgbọ elu ndị iro. Nke a bụ dịka akụkọ nke abụọ sitere n’aka Ndị Ọrụ Ọgbọelu nke Iran wepụtara. Ọ…
Akwụkwọ ndekọ Wuhan Coronavirus na Washington State
Otu onye na steeti US nke Washington bụ onye mbụ na obodo ahụ chọpụtara na ọnya coronavirus ahụ dị omimi. Achọpụtara ikpe ahụ na obodo Wuhan, China, ebe ọtụtụ narị mmadụ…
BOOM! Russia na-ewu Iwu Mbido na Ihe ngosi Satellite
Onye nchịkọta akụkọChristina Kitova
Roscosmos chọtara otu ụzọ iji zoo ọrụ kpụrụ iche n'ime Russia ma gbochie satin satellites inweta ozi n'ime mpaghara. Ọzọkwa, ndị nchọpụta Roscosmos mepụtara usoro iji zoo ihe omume ndị dị na Russia na…
Trump, Thunberg Nsogbu na Davos n’elu Ihu Igwe
Agba nke 50 nke World Economic Forum malitere na Tuesday na Davos, Switzerland, nke arụmụka jupụtara na ya na-emetụta mgbanwe na ihu igwe. N'afọ nke abụọ na esepu, onye na-eto eto Sweden onye ntorobịa Greta Thunberg bụ…
Eureka! Usoro nka enwere ike inwe ihe ndi ozo di na Atom
A na-ekwupụta ọrụ ọhụrụ gbasara physics n'okpuru mmekorita ndị Russia na German, na-emetụta omume nke elektrọn na atom nwere ụdị iche dị iche iche nke otu ahụ. Elektrọn bụ irighiri ihe na-adịghị mma ebubo…
Igwe ọkwọ ụgbọ ala mbụ nke ụwa na-enye gị ohere ịhụ nke ọma ihe ndị na-akwọ ụgbọ ala na-ahụ
Ugbu a, igwe ndị a na-agba n'ọsọ nwere ọtụtụ igwe onyonyo na-enye ohere igosipụta onyonyo site n'ọtụtụ akụkụ n'oge mgbasa ozi. Ọ bụ naanị ugbu a Fans nwere ike imecha hụ…
Ihe kpatara Digital Digital dị Mkpa maka Obere Ndị Azụmaahịa
Onye nchịkọta akụkọAustin W
Ahịa ahịa dijitalụ na-enye ndị nwe obere azụmaahịa ngwaọrụ ha kwesịrị iji kwalite ụdị ha na ndị na-ege ntị na-ele anya. Ndị otu nwere ngwa ọrụ dị ala mgbe ha jiri ọrụ ahịa dijitalụ kpọtụrụ ugbu a na…
Newzọ Ọhụrụ nke Russia Maka Ndozi Iwu? Ma ọ bụ, ọ bụ naanị Oge maka Emperor Putin?
Ndozigharị na iwu Russia na-eme ka ndị mmegide nwee olileanya na kedu ọdịnihu Russia na gọọmentị? N'ezie, Russia enweghị mmegide. Onye ndu mmegide pseudo Alexei Navalny…
Ọdịiche dị n’etiti Visa 189 na Visa 190
A maara onyinye Subclass 189 nwere ikike dị ka nnwere onwe dị ka visa dị na isi. Visa a bụ maka ndị ọrụ na-ahọpụtaghị, ndị ezinaụlọ, ókèala ma ọ bụ steeti ahọpụtaghị. Isi uru nke a…
Akwụkwọ nyocha ọhụrụ nke CIA kpughere ndị omekome agha Nazi - Stepan Bandera nke Ukraine dị na Ndepụta
CIA edeputala akwụkwọ n'okpuru iwu chọrọ ka ekpughere ndị omekome agha Nazi. Central ọgụgụ isi Agency bụ ndị nkịtị ndị ọrụ nzuzo ọgụgụ isi nke gọọmentị etiti United States, ọrụ ...
Israel na etiti mba ụwa maka ncheta ụbọchị ncheta ezumike nke mba ụwa
Onye nchịkọta akụkọDavid Wexelman
Israel n'izu a bụ n'etiti ụwa dịka ọ na-anabata ndị ọbịa si mba dị iche iche nke ụwa isonye ọnụ na ncheta ụbọchị ncheta mba ụwa. Ncheta nke nde ndị Juu isii…
Ndị Nkịta nke Europe: Otu n'ime Ngwọta Ego Ego Dị Nso
Onye nchịkọta akụkọNkịta nke Europe
Obi dị anyị ụtọ iwebata ihe ọhụrụ kachasị na Pọtụfoliyo nke ngwọta itinye ego, Dogs of Europe. Ezubere maka iweputa oke nke European Blue Chips nke nwere ike itolite ego…
Ngwaọrụ 7 E-azụmaahịa kachasị elu nke na-enyere aka ịgbanwe ndị ọbịa ka ha zụta ndị ahịa
Onye nchịkọta akụkọAdesan john
Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-adọga na-enweta nnukwu okporo ụzọ, mana ọnụọgụ ndị na-agbanwegharị na ndị ahịa na-adị obere, ịnwere ike ịnwere enyemaka site na ngwa ọrụ E-Commerce dị iche iche. Ugbu a bụ oge imechi akụkụ gị niile…
Oge kachasị mma maka ịgbazite ụlọ na 2020
Kedu mgbe bụ oge kacha mma iji gbazite ụlọ? Ọ bụ n’oge udu mmiri ma ọ bụ n’oge ọkọchị? Ọ bụ ihe na-ewu ewu na usoro iche echiche na oge oyi ga-abụ nke kachasị ọnụ
Mara iru ntozu gị maka PR na Australia dị ka Onye anam Visa Subclass 189
A na-ahụta ikike Subclass 189 nke nwere aka dị ka ihe nlere na-elele anya na visa a bụ maka onye ọrụ na-abụghị ndị mpaghara ọ bụla ma ọ bụ ala steeti họpụtara, onye otu ezinụlọ ma ọ bụ onye ọrụ. Visa a na-anabata gị…
Russia na-enwe ndị na-ebu ụgbọelu - Ọdịnihu ga-adị iche n'okpuru Putin?
Kemgbe ụwa, Russia esighi ike n'ihe metụtara agha osimiri. Inweta ihe atụ nke Agha Tsushima na 1905. A makwaara ya dị ka Agha Tsushima Strait na Naval Battle nke…
Kedu ka Blockchain si agbanwe Mgbasa Ozi na Ntụrụndụ?
Blockchain na mgbasa ozi na ntụrụndụ? Chere, esoghị ya na cryptocurrencies dị ka bitcoin? Ee, mana enwere ike karịa ka anyị kwenyere. N'ime ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ ntụrụndụ, ọ nwere ike inye aka na ọ bụghị…
Ego a na-ejidego ịkwụ ụgwọ dị elu na-enyere ndị ọrụ aka ichekwa nkwụghachi ha chọrọ - Gosiri etu esi mejupụta New 2020 W-4
Esịse Mmanụ Na-ahụ Maka Nwepụta Azụbapụta andtụkọtara Ihe improvedtụ Ego Ewuwu na nke ọhụrụ, nke a haziri iji nyere ndị ọrụ aka ịgbalị nkwụghachi nkwụghachi ụgwọ ha chọrọ site n'inwe ụtụ ego gọọmentị etiti wepụtara na…
Ozi Okwute Aka Mghachita: Ihe karịrị 5,000 Posts!
Onye nchịkọta akụkọFree Gigs Freelance
Akwụkwọ mgbasa ozi biputere edemede 5,000 ya n'oge na-adịbeghị anya, na-egbochi ọnụ ọgụgụ dị egwu nke onye ntinye aka na uto onye na-agụ ya. Ihe karịrị ndị enyemaka 1,000 edebanyela ruo ugbu a, saịtị ahụ nwekwara ihe karịrị 20,000 ndị ọbịa pụrụ iche na…
Gịnị kpatara ị ga-eji kwụọ ndị ọrụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ ọnwa ha?
Ihe puru iche inabata onyinye enye diri ya nwere ike iburu ya agha ma obu otu ihe ka ndi n’achu oru choro oge nile. Vaguely na-efegharị site na post / mgbasa ozi, anya nke atụmanya ozugbo…
Transphobic Radio ọbịa na-agọnarị mmegide nwoke na nwanyi
Na ntụgharị azụ gaa na ederede m dere, Maazị Pratt kwadoro Podcast ọzọ nke isiokwu ya bụ "HD83: Democrat na-ekwu na ọ bụ onye tara isi maka nkatọ a na-eledaghị ya anya." Nke mbụ, ọ na-ekwu na mmerụghị m ahụ n'ihi Podcast gara aga…
Etu ị ga-esi nweta Subọti Visa Independent a Mịsọ 189
Ọ bụrụ na Australia bụ obodo ịchọrọ n andanya na ịchọrọ ịnọrọ ma biri na Australia mgbe ahụ a subclass Independent Visa 189 bụ ọkacha mma maka gị. Visa a na-anabata gị ka ị nọrọ…
Ekele diri Chukwu maka inye Ike
Ndị mmadụ ejighị ndụ ha egwu egwu. N’ụtụtụ mgbe ị na-eteta n’ụra, ị kwesịrị ịgọzi Chineke maka inye gị ụbọchị ọzọ. Omenala ndị Juu bụ ịgọzi Chineke maka ahụike mgbe ịga…
Arkbanye na njem iji bụrụ onye isi oche nke kọleji
Onye isi oche kọleji bụ onye ndu kọleji ma ọ bụ mahadum. Ọkachamara nwere ike igbanwe ụlọ ọrụ na ikike na ikike ọhụụ, na-edozi nsogbu ma na-agwa ọgbọ ọhụrụ nke ndị na-amụ akwụkwọ na-asọpụrụ…
Greshun De Bouse: Equality For All Eme Na-eme Ka Nnukwu America
Ọ dị mma. Ya mere anyị niile maara Greshun De Bouse bụ Queen of Ihe niile pụrụ iche! Ọchị ya na-emeri, buru ibu karịa ndụ mmụọ dị mma na-efe efe! Akụkụ nke ihe na-enye ya nnukwu ume bụ nkwa ya…
N’afọ 2020, Jiri Ọzụzụ Mmụta Nkụzi Kachasị Ebere na Australia malite
O nweghi oke oke mmuta mgbe ị di na nwata na ulo akwukwo. Usoro mmụta buru ibu, na-emelite ma kwekọrọ na oge a. Agum akwukwo abughi ihe banyere imuta ihe banyere nka na uzu kama…
Egwuregwu dị n'etiti Conservative na echiche na-anabata ihe nke ụwa
Mmetụta na-aga n'ihu na-emetụta ndị Alakụba Ọtọdọks, Ndị Kraịst, ndị Hindu na ndị Juu n'ụwa niile. Na akụkọ bụ otu edemede banyere ụka Katọlik Pope Benedict dọrọ aka ná ntị megide iwu izu ike dị ka ndị ụkọchukwu. Pope Benedict gbara arụkwaghịm…
Usoro nkuzi HR na ntanetị nyere aka mee ka ọrụ gị ka mma
Learningga n’ihu ịmụ ihe dị mkpa iji chọọ ohere ọhụụ na ibulịa elu ọrụ. Ọ dị mkpa ka ị mụta nkà ndị ọhụrụ, soro ọnọdụ ndị kachasị ọhụrụ, imepe ikike idu ndú na ọtụtụ ndị ọzọ. Na-aga n’ihu mmuta maka…
Mgbakwunye DHX Media / Agụụ ọhịa, Oge dị mkpụmkpụ, Mkpụrụ Ego dị elu, Ndozi ego mbata, Ego karịrị 9.5% YTM
Onye nchịkọta akụkọDurig's FX2
N’izu a, nyocha izu nke Durig na-elele ụlọ ọrụ Canada ọzọ na-elekwasị anya na ọdịnaya ụmụaka na ụdị aha ụmụaka. May nwere ike ịnụbeghị banyere WildBrain (nke bụbu DHX Media), mana ị nwere ike ịmara ụfọdụ…
Greshun De Bouse Maka Ndị Mmegide: 'Biko Kwụsị Ize Ndụ M'
Onye ndu ụwa anyị hụrụ n'anya Greshun De Bouse nwere ndụ ọkwado na arụ ọrụ! Anyị hụrụ ya n'anya maka nke ahụ! N'ọnọdụ ọ bụla, a hụrụ ya ka ọ na-eme nyocha, na-agakwa na ndị isi / ndị ama ama na-ezute ma na-ezukọta, n'oche niile…
E bipụtara CN n’elu asụsụ 100
Nyefee Aricles Ebe a ma bipụta ụwa
Choo ozi mkparịta ụka
Ntutu CN Kasị Eke 1
MGBE ỌZỌ: Asambodo Asụsụ Chinese Mmemme Na-egosi na Ọ Bụ Python Dabere
Ajụjụ Ndị Pụrụ Iche Mgbe Nyochaa E-commerce Platform gị
Agụmakwụkwọ Azụmaahịa Drone
Volkswagen na-achịkọta mkpokọta asaa maka nchịkọta ndị gbara ọsọ ndụ
Ejikọtara Ọrụ Nlekọta na Ahịa Nlekọta na Ngbanwe Digital
Iranian klọb ga-asọmpi Njikọ Njikọ nke AFC
CBỌCH, Gị, YOURzọ Gị: Jiri Igwe Oku Igwe ojii Na-arụ Ọrụ Na-ewu Yourlọ Azụmaahịa Gị
Free Gigs Freelance
Microjob - Ebe nrụọrụ efu zuru oke na-azụ ahịa Gigs
Mwepu akụkọ mgbasa ozi 3 zuru ụwa ọnụ / ọtụtụ puku echiche
Akwụkwọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Zuru Globalwa Nile
Grade AAA Edezi Asụsụ Bekee Edezi ($ 45 n'ime otu puku okwu)
Kwalite azụmahịa gị - Ederede 3 n'asụsụ 100 maka $ 149
3 (21) Onye Ndụmọdụ itinye ego - Ọrụ Fiduciary - Flat ụgwọ nke $ 50 / Hour of Consulting
Edemede mara mma, nke edere nke ọma na nke Seamlessly na-akwalite azụmahịa gị
Ọrụ Fiducier ọkachamara - $ 100 maka awa 2
Biputara ndi akuko 3 weputara ihe karịrị 2 izu maka $ 21
Mepụta ndenye akụkọ 2 maka $ 16 - Ndi Kachasị PR na Internetntanetị?
Kwusara nkwupụta mgbasa ozi gị na Google & Nkwukọrịta maka naanị $ 11!
Ikwesiri ịdebanye aha gị dị ka onye na - ahụ maka CN ma ọ bụ onye debanyere aha iji kwuo
Brendan Monaghan (CN Staff) on Olê, Olê Mister - Akụkọ nke Jorge Jesus na Flamengos
Christina Kitova on Ozi Okwute Aka Mghachita: Ihe karịrị 5,000 Posts!
Christina Kitova on Oge ezumike: China na-alụ ọgụ Wuhan Coronavirus megide mbịarute Afọ Ọhụrụ China
Jared Baxter on Azụmaahịa Agụmagwa Edere mmadụ
MW on Oge ezumike: China na-alụ ọgụ Wuhan Coronavirus megide mbịarute Afọ Ọhụrụ China
MW on Rheinmetall - German onye mmeri chere ihe mgbochi na World Defense
Rocco Lewis on Ngwurugwu Ọgbara Drigbọala Digital oilfield Market
Gordon Fiddes on Stampede na Soleimani olili ozu 50, Injures 212
Pick’s CN Editor
Ntinye nke CN
Ndọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị CN
Nkà na ụzụ CN
CN Banyere Anyị
Isiokwu CN Sumit - Kwusara
Mgbasa Ozi CN
CN & Ọnọdụ CN
CN Bụrụ onye debanyere aha
CN Bụrụ onye na-enye aka
FGG Debanye aha Dị ka onye na-eweta Gig
FGG biputere Gig
Edemede efu nke FGG maka ndi mbido
Egosipụtara Inwetakwu CN
Ihe enyemaka CN Pain - Numbing ude, Gel & Spray